DAAWO:- ”xildhibaan Xidig Waa Jaajuus u shaqeeya Kenya & Imaaraad muuqaalana waa ka hayaa” - Idman news
DAAWO:- ”xildhibaan Xidig Waa Jaajuus u shaqeeya Kenya & Imaaraad muuqaalana waa ka hayaa”
Xildhibaan Daahir Aamin Jeesow oo katirsan xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabey hadal uu dhowaan sheegay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo kamid ah mudanayaasha laga soo doorto deegaamada Jubbaland.
Daahir Aamin Jeesow oo ka jawaabayey hadalkii Xidig ayaa sheegay inuusan la yaabanayn isla markaana uu horay uga hayey muuqaalo uu kaga dalbanayo in la dilo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe).
“Waxaan haayaa Vedio oo iga codsanayaao Xidig aniga oo baraha bulshadana soo dhigi doono xildhiban Xidig oo iga codsanaayo in aan aniga Axmed la dilo” ayuu yiri xildhibaan Daahir Aamiin Jeesow.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu xildhibaanka kale ku eedeeyey la shaqaynta dalal shisheeye gaar ahaan Imaaraadka iyo kenya “Xidig waa sedex Kaare shalay Tikree u shaqeynayay oo Jaajuus u ahaa,maanta waxaa uu u shaqeynayaa Imaaraad iyo Kenyaati”.
Previous articleIngiriiska Oo Gaadiid Badan Ku Wareejiyay Dowladda Somalia +Sawirro
Next articleDAAWO Xildhibaan Xidig oo caayay Xildhibaan Jeesoow
Previous Xeer Ilaaliye Sulayman: “ Sax maahan maalin kasta in aan liiska hore kaga jirno musuq-maasuqa..”
Next Weerar ku bilaawday qarax is-miidaamin ah oo lagu qaaday Janaay-Cabdalla – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia